लसुनमा कालोबजारी ! सरोकारवाला निकाय मौन – Khabarhouse
लसुनमा कालोबजारी ! सरोकारवाला निकाय मौन
Khabar house | २१ माघ २०७६, मंगलवार १४:४४ | Comments
काठमाडौं, २१ माघ । बजारमा लसुनको मूल्य दोब्बर बढेको छ। दुई साताको अवधिमै प्रतिकिलो ३ सय ३५ रुपैयाँले मूल्य बढेको हो। अहिले बजारमा लसुन अभाव समेत रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण चीनतर्फका नाका ब’न्द हुँदा लसुन आयात घटेकाले मूल्य बढेको व्यवसायीहरुले बताएका छन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने लसुनमा कालोबजारी भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालमा ८० प्रतिशत लसुन चीनबाट आयात हुन्छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी वजार विकाश समितिको तथ्यांक अनुसार गत माघ १ देखि हाल सम्म १ सय २ टन लसुन चीनबाट आयात भएको छ । विहीवार मात्रै ३ टन लसुन कालीमाटी तरकारी बजारमा आपूर्ति भएको तथ्यांक छ । तर, कालीमाटीकै थोक बजारमा सहित सिमित ठाउँ बाहेकमा लसुन अभाव छ ।
सिमित व्यापारीले प्रतिकेजी ६ सय ५० रुपैयाँ लिई बेचि रहेका छन् । एक महिना अघि मात्र प्रतिकेजी २ सय १५ थियो । व्यापारीहरुले चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नाका बन्द भई आयात निर्यात नहुँदा लसुन अभाव रहेको बताएका छन् । यता, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकाश समिति भने हाल विक्रि भएका लसुन एक महिना अघिनै आयात गरिएको बताउँछ ।
व्यापारीले अस्वभाविक नाफा कमाउने नियतले यति धेरै मूल्य बढाएको समितिको भनाइ छ । हाल काठमाडौंको बजारमा दैनिक ३ टन लसुनको माग रहेको छ। यो महिना प्रत्येक दिन ५ टन हाराहारीमा लसुन आइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि अहिले नै लसुनको मूल्य बढ्ने अवस्था छैन ।
व्यापारीले सामान्य मूल्य बृद्धि नगरेर ३ सय ३५ रुपैयाँ प्रति किलो मूल्य बढाएर कालो बजारी गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । कालो बजारी हुँदा नियमक निकाय मौन रहनुले प्रसश्तै शंकाका आधार बनाएको छ । वार्षिक चीनबाट मात्रै ६०४ टन हारहारीमा लसुन भित्रिन्छ । गत वर्ष नेपाली उत्पादन भनी कालीमाटी बजारमा ४ सय ७५ टन लसुन आएको थियो । कालीमाटी फुलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितका अनुसार भारतबाट हुने आयात शुन्य जस्तै छ ।